UJAMES HONG, 'OYENA MDLALI WEHOLLYWOOD WENZA KAKHULU,' EKUGQIBELENI UNOKUFUMANA INKWENKWEZI YEWALK OF FAME - IINDABA
UJames Hong, 'oyena mdlali weHollywood wenza kakhulu,' ekugqibeleni unokufumana inkwenkwezi yeWalk of Fame
Unetyala elongezelelekileyo kunaye naphina umntu waseHollywood, kodwa nangona kunjalo akayonkwenkwezi yokwenyani.
Kumsebenzi wakhe odumileyo, umdlali weqonga uJames Hong - osandula ukuba yintsholongwane njengoyena mdlali weqonga waseHollywood - uqokelele ngaphezulu kwe-600 ebonakala ngetyala kwaye wachukumisa imisebenzi emininzi, kodwa nangona kunjalo akanankwenkwezi kwiHollywood Walk of Fame.
mega ezizigidi zeetv
Ngoku, iqela elinyukayo labalandeli lizama ukwahluka kwi-Hong, i-91, enemisebenzi eyahlukeneyo eyamkela iSeinfeld, Ingxaki enkulu e-China encinci kunye ne-Blade Runner.
Ndikhankanyile ngaphambili kwaye ndizokuphinda ndiyitsho kwakhona: UJames Hong ufanele inkwenkwezi kwi #Hollywood Walk of Fame. Sele ndiqalisile ikhosi yokutyumba. Ngubani onam? #StarForJamesHong, ubhale iHawaii ezintlanu-0 kunye neNkanyezi elahlekileyo uDaniel Dae Kim kwi-tweet yangoku yintsholongwane ekuqaleni kwale nyanga.
Abanye abadlali kunye noHarry Shum Jr., waseAsiya oCebileyo oTyebileyo, kunye nohlekiso uKen Jeong bongeze uncedo lwabo kuHong ukufumana inkwenkwezi, ingxelo ye-CNN.
Abantu abangama-30 bonyulwa minyaka le ukuba bongezwe kwiNdawo yoDumo, indawo yokuyila kunye nokuseta amaxabiso eenkwenkwezi angama- $ 50,000. UKim, 52, sele ephakamisile mkhulu kunokwaneleyo ngendlela yeGoFundMe.
ngumama okwishumi elivisayo 2 kwi-netflix
Le ndoda ibonisa ixesha 'lomlingisi osebenzayo,' kwaye loo nto ayenzi nesibonelelo sayo yonke into ayenzileyo ukunceda umzekeliso owongezelelweyo wabadlali bemibala, ifunda inkcazo yomnyusi wengxowa-mali kaHong. Masibonise le ndoda intlonipho nothando lomsebenzi wayo oyifaneleyo ngokumfumanela inkwenkwezi kwiHollywood Walk of Fame!
U-Hong ngokwakhe ukholelwa ukuba ukungabikho kwakhe kwi-Walk of Fame kungaphezulu kokujonga nje ishishini. Kudliwanondlebe kunye nePodcast yeBali eliKhulu, wabhekisa kulo njengobungqina bokuqhubeka kukaHollywood.
Ukuza kuthi ga ngeli xesha, 500 ikhredithi okanye kunjalo, andinayo inkwenkwezi kuHamba loDumo. Ke ngandlela thile kukho ubandlululo oluninzi olufihliweyo emva kweli shishini. Abathathi ngathi, njengoko ndisitsho, umntu oyintloko oyintloko, wacebisa indawo. Kwaye ndizama ukulwa ngokuchasene noko.
Imvelaphi UJames Hong, 'oyena mdlali weHollywood wenza kakhulu,' ekugqibeleni unokufumana inkwenkwezi yeWalk of Fame
Izigaba: Umqala Iwiki Hollywood
i-archie comics iinyoka ezisemazantsi
ubukele njani umboniso omkhulu wokubhaka waseCanada kuthi
Kutheni le nto dolly parton enxibe iiglavu
Ikrisimesi emyoli yetreyila
Uxwebhu lwe-mtv britney
ukuhanjiswa kweposi ngosuku lwesikhumbuzo
I-rakudai kishi akukho xesha lamahashe 2 umhla wokukhutshwa